चीनको वुहानमा ४० वर्षीय छोरा पुष्करको निधन ! « Online Tv Nepal
चीनको वुहानमा ४० वर्षीय छोरा पुष्करको निधन !
Published : 15 March, 2020 11:12 am
बिहान उठेपछि तस्बिरमा छोरोको हँसिलो अनुहार हेर्छिन् । राति सुत्नुअघि त्यही फोटो नियालेर सिरानी नजिकै राख्छिन् । यताउता कोल्टो फेरेर निदाउन खोज्छिन् । निद्रा लाग्दैन । आमा सरस्वती खड्का (६५) लाई यस्तो छटपटी भएको दुई महिना भयो । चीनमा छोरो बितेको खबर पाएयता उनका आँखा ओभाना छैनन् ।
‘आमा उठ्नु भो, खाना खानु भो ? सन्चो–बिसन्चो के छ ?’ भनेर फोनमा सोधिरहन्थ्यो,’ दोलखा शैलुङ गाउँपालिका–३ काटाकुटीकी सरस्वतीले मसिनो स्वरमा भनिन्, ‘अब कसले सोध्छ त्यसरी ? बल्लबल्ल निदाउँछु, सपनामा पनि खै किन हो, आउँदैन । सद्गत गर्न पाए आउँथ्यो कि ।’
गत माघ ४ गते राति चीनको हुबेई प्रान्तस्थित वुहानमा उनका ४० वर्षीय छोरा पुष्करको नि’धन भयो । भोलिपल्ट परिवारले यो दु:खद खबर पाए । तर अहिलेसम्म न उनको पोस्टमार्टम भएको छ, न श’व नेपाल ल्याउने सुरसार नै । श’वको प्रतीक्षामा रहेकी आमा सरस्वती भगवान्को नाम जप्दै फ्रेममा राखिएको फोटो नियाल्छिन् ।
‘अर्को वर्ष आउँछु, गाउँमै केही व्यवसाय गरेर सँगै बसौंला है आमा भन्थ्यो,’ आँसु पुछ्दै उनले भनिन्, ‘सँगै बस्ने र भेट्ने त लेखान्तमै रहेनछ ।’ जसरी पनि चाँडो छोराको श’व ल्याइदिन उनले सरकारसँग गु’हारिन्, ‘जिउँदो भेट्न नपाए पनि छोराको सद्गत गर्ने इच्छा छ, छिटो श’व ल्याइदिनुपर्‍यो ।’
ओलीको प्रश्न– ‘मिल्क होलिडे भनेको के हो ? गाई भैसीले बुझ्छ र ?’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बढी मात्रा दूध उत्पादन भए दूध प्रयोग गरेर चकलेट उद्योग
दुखद खबर : ललितपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
ललितपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान ललितपुर महानगरपालिका-१५ थसिखेल चोकमा
सावधान ! राति निन्द्रा नलाग्नुको एउटा कारण यस्तो पनि हुनसक्छ
के तपाईंलाई राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन ? त्यसो हो भने सावधान ! यो एउटा रोग
सुत्नु अगाडी झुक्किएर नगर्नुस यी कामहरु जान सक्छ ज्यान-पुरा पढ्नुहोस
यो अति लाभदायी सामाग्री आफुले पढेपछि सबैको जानकारीका लागि सेयर गर्नुहोला । एजेन्सी । आज
ओलीको प्रश्न– ‘मिल्क होलिडे भनेको के हो ? गाई
सावधान ! राति निन्द्रा नलाग्नुको एउटा कारण यस्तो पनि
सुत्नु अगाडी झुक्किएर नगर्नुस यी कामहरु जान सक्छ ज्यान-पुरा